कविताः अामाकाे सपना
आमा, त्यो आउँछ र ? “हो, बा, त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्यझैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीतजस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ; त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ! त्यो आउँदा
लेखन कुञ्जमा पुस्तक हटिया
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पल्ट पुस्तकको हटिया सुरु भएको छ । लेखन कुन्जमा भएको पुस्तक हटियाको उद्घाटन गायक , नायक र विमान चालक विजय लामाले गर्नुु भएको हो । तराईमा
मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार कोइरालालाई दिइने
काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागद्वारा स्थापित ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०७४’ यस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक कमल कोइरालालाई प्रदान गरिने भएको छ । विभागको आइतबार बसेको
गीतकार अमर राईले दिए संघको अक्षयकोषलाई १५ लाख
काठमाडौं । गीतकार तथा कवि अमरसिंह राई अमर बान्तुले गीतकार संघको अक्षयकोष स्थापनाको लागि १५ लाख रुपैयाँ गर्नुभएको छ । गीतकार राई संघका अध्यक्ष चूडामणि देवकोटालाई शुक्रबार सहयोग रकम हस्तान्तरण